Ankoatra ny olon-dehibe dia manao ihany koa ny ankiuzy madinika no sady efa nahavitan’ireo mpanjaitra karazana lamadin’akanjo ihany koa. Ho ana mpivarotra iray tetsy Isotry dia fantatra fa mahalafo tee-shirt folo isan’andro ny mpivarotra raha kely ka ireo mandeha mivoaka any amin’ny faritra no tena mividy izany. Mifangaro ao anatin’izany ny an’olon-dehibe sy ny an’ny ankizy ankoatra ireo karazana jogging na tee-shirt ambony sy ambany amin’ny loko maro isan-tsokajiny. 7.000 Ar no hamarotan’izy ireo ny tee-shirt iray ho an’ny ankizy raha mahatratra 100.000 Ar kosa ny lafo indrindra ho an’ny olon-dehibe amin’ireo marika tena izy sy miavaka. 30.000 Ar kosa ny jogging ho an’ny ankizy raha 50.000 Ar ny an’ny olon-dehibe amin’ireo karazana tsotra. Nanambara ihany koa moa ireo mpanao kisary amin’ny tee-shirt etsy Ambohijatovo fa nitombo ihany koa ny kaomandy azon’izy ireo hatramin’ny naharesen’ny ekipam-pirenena Barea tamin’ny herin’ny omaly Alahady. Manomboka amin’ny 200 isa isan’andro mantsy izany ka hatramin’ny 300.